Penguine 2.0 - သင်သိသင့်တဲ့အချက်လေးချက် Martech Zone
Penguine 2.0 - သင်သိသင့်တဲ့အချက်လေးချက်
သောကြာနေ့, မေလ 24, 2013 သောကြာနေ့, မေလ 24, 2013 Jayson DeMers
အဲဒါဖြစ်ခဲ့တယ် တ ဦး တည်းဘလော့ဂ်ပို့စ်များနှင့်အတူ, algorithm ကို၏မိတ်ဆက်နှင့်နာရီပေါင်းများစွာအပြောင်းအလဲနဲ့, Penguin ကို 2.0 လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ အင်တာနက်ဘယ်တော့မှအတူတူဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ Matt Cutts သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မေလ ၂၂ ရက်တွင်တိုတောင်းသောပို့စ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Penguin 22 နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သောအဓိကအချက်လေးချက်ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
၁။ Penguin 1 သည်အင်္ဂလိပ်နှင့်အမေရိကန်မေးမြန်းမှုများ၏ ၂.၃% ကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။
အနည်းဆုံး ၂.၃% သည်သင့်အားအသံအနည်းငယ်သာကျနေစေရန်သို့မဟုတ်တစ်နေ့လျှင် Google ခန့်မှန်းခြေ ၅ ဘီလီယံခန့်ရှိကြောင်းသတိရပါ။ 2.3 ဘီလီယံ၏ 5% အများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစားစီးပွားရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်အသွားအလာနှင့် ၀ င်ငွေအတွက်မေးမြန်းမှုပေါင်း ၂၅၀ ပေါ်တွင်မူတည်နိုင်သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်ဒdecimalမအရေအတွက်ကအကြံပြုလိမ့်မည်ထက်ပိုကြီးသည်။
နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ Penguin 1.0 သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်အားလုံး၏ ၃.၁% ကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။ ကြောင်း၏ကပ်ဘေးဆိုင်ရာရလဒ်များကိုသတိရ?
၂။ Penguin2သည်အခြားဘာသာစကားမေးမြန်းမှုများကိုလည်းထိခိုက်သည်
ဂူဂဲလ်၏ရှာဖွေမှုအများစုသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပြုလုပ်သော်လည်းသန်းပေါင်းရာနှင့်ချီသောအခြားသောဘာသာစကားများဖြင့်ပြုလုပ်သောရှာဖွေမှုများရှိသည်။ ဂူဂဲလ်၏ algorithmic သက်ရောက်မှုသည်ဤအခြားဘာသာစကားများနှင့်အကျယ်တဝင့်သက်ရောက်သည်။ ၎င်းသည် webspam ပေါ်တွင် kibosh ကိုကမ္ဘာ့အဆင့်တွင်ထားစေသည်။ webspam ၏ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားသောညှိုးနွမ်းသောဘာသာစကားများကိုပိုမိုထိခိုက်လိမ့်မည်။
3. အဆိုပါ algorithm ကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားပြီ။
ဂူဂဲလ်မှာလုံးဝရှိတယ်ဆိုတာသတိရဖို့အရေးကြီးတယ် Penguine 2.0 အတွက် algorithm ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်။ “ 2.0” အမည်ပေးခြင်းအစီအစဉ်ကထိုနည်းအတိုင်းအသံထွက်စေသော်လည်း၎င်းသည်ဒေတာကိုအသစ်ပြုပြင်ရန်မျှသာမဟုတ်ပါ။ algorithm အသစ်တစ်ခုအရ spammy လှည့်ကွက်ဟောင်းများသည်အလုပ်မလုပ်တော့ဟုဆိုလိုသည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကဒီဟာကို Penguin နဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ဤတွင် Penguins ၏ကျည်ဆန်သမိုင်း။
24ပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၃ - Penguin ၁။ ပထမဆုံး Penguin update ကိုAprilပြီ ၂၄ ရက် ၂၀၁၂ တွင်ရရှိခဲ့ပြီးမေးမြန်းချက်များ၏ ၃% ကျော်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
မေလ ၂၆ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်။ တစ်လအကြာတွင်ဂူဂဲလ်သည်စမ်းသပ်မှု၏အနည်းငယ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့် algorithm ကိုလန်းဆန်းစေပြီး ၁% ခန့်ရှိသည်။
၂၀၁၃ အောက်တိုဘာ ၅ ရက်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ဂူဂဲလ်သည်အချက်အလက်များကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်တင်ပြခဲ့သည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် ၀.၃ ရာနှုန်းသည်မေးမြန်းမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
မေလ ၂၂ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် - Penguin 22 သည်မေးခွန်းအားလုံး၏ ၂.၃% ကိုသက်ရောက်မှုရှိသည်။
Cutts မှ 2.0 ကိုရှင်းပြခဲ့သည်မှာ“ ဒါဟာအသစ်စက်စက် algorithms မျိုးဆက်သစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခင် Penguin ၏ကြားဖြတ်သည်အခြေခံအားဖြင့် site ၏ home page ကိုသာကြည့်လိမ့်မည်။ မျိုးဆက်သစ် Penguins သည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာသွားပြီးအချို့သောsmallရိယာများတွင်အမှန်တကယ်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။
Penguin မှထိခိုက်သော ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူများသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုခက်ခဲမည်ဟုခံစားရပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်လည်းအချိန်ယူရလိမ့်မည်။ ဤသည် algorithm ကိုနက်ရှိုင်းစွာသွားသည်, ဆိုလိုတာက၎င်း၏သက်ရောက်မှုအလားအလာချိုးဖောက်မှုအတွက်စာမျက်နှာအားလုံးနီးပါးမှဆင်း trickles ဆိုလိုသည်။
၄။ Penguins တွေများလာလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့နောက်ဆုံး Penguins ၏အသံကိုမကြားရဘူး။ ဂူဂဲလ်သည်သူတို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့် algorithmic အပြောင်းအလဲတိုင်းနှင့်ပြုလုပ်ပြီးသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် algorithm ၏နောက်ထပ်ချိန်ညှိချက်များကိုမျှော်လင့်ရသည်။ Algorithms သည်ပြောင်းလဲနေသော ၀ က်ဘ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်။
Matt Cutts က“ ကျနော်တို့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုညှိနိုင်ပေမယ့်အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုတက်ချင်တယ်။ သူ၏ဘလော့ဂ်တွင်မှတ်ချက်ပေးသူတစ် ဦး ကဂူးဂဲလ်သည်“ link spammers များအတွက်တန်ဖိုးကိုငြင်းပယ်ခြင်း” ရှိ၊ မရှိမေးမြန်းခဲ့သည်။
၎င်းသည်လာမည့်လအနည်းငယ်အတွင်း Penguin 2.0 ၏သက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်တင်းကျပ်စေခြင်းနှင့်အချို့သောလျော့နည်းမှုများအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။
၀ ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူနှင့် SEO တော်တော်များများသည်သူတို့၏ပုံမှန်မဟုတ်သောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ site တွင် algorithm ပြောင်းလဲမှု၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်။ မကျေနပ်ကြပါ။ အချို့ webmaster များသည် webspam တွင်ရေကူးနေသောနယ်ပယ်များတွင်တည်ရှိသည်။ သူတို့သည်ခိုင်မာသောအကြောင်းအရာများဖန်တီးရန်၊ မြင့်မားသောအာဏာရှိသည့်ချိတ်ဆက်မှုများတည်ဆောက်ရန်နှင့်တရားဝင် site တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်လပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ကြသည်။ သို့သျောလညျး, algorithm ကိုအသစ်၏ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်အတူ, သူတို့လည်းပြစ်ဒဏ်များကြုံတွေ့ရ။ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှ webmaster တစ် ဦး က“ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအာဏာပိုင်ကွန်ရက်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ငါမိုက်မဲခဲ့သလား” ဟုညည်းညူခဲ့သည်။
နှစ်သိမ့်မှုပေးသောအခါ Cutts က“ မင်းတို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာအမျိုးအစားကိုအထောက်အကူပြုသင့်တဲ့အရာတွေဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာလာမယ်။ ဒါကြောင့်မင်းကတည်ဆောက်ခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောက်ဖို့သင့်တော်တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ငါထင်တယ်။ ”
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ algorithm သည်နောက်ဆုံးတွင် webspam နှင့်အမီလိုက်သည်။ ဂိမ်းကစားရန်အတွက်နည်းလမ်းအချို့ရှိကောင်းရှိနိုင်သေးသည်။ သို့သော် Panda သို့မဟုတ် Penguin ဘောလုံးကစားကွင်းသို့လမ်းလျှောက်သွားသောအခါဂိမ်းများသည်တိတ်ဆိတ်စွာရပ်တန့်သွားသည်။ အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံး ဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာရန်.
သင်ပင်ဂွင်း 2.0 သက်ရောက်သလား
သင်အံ့သြနေလျှင် Penguine 2.0 သည်သင့်ကိုထိခိုက်မှုရှိမရှိ, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
သင်၏သော့ချက်ကျသောအဆင့်ကိုစစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်မေလ ၂၂ ရက်မှစတင်ကာသိသိသာသာကျဆင်းသွားပါကသင့်ဆိုဒ်ကိုထိခိုက်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းကောင်းရှိသည်။
ချိတ်ဆက်မှုတည်ဆောက်ခြင်းအာရုံအများဆုံးရရှိသောစာမျက်နှာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။ ဥပမာ - သင်၏မူလစာမျက်နှာ၊ ပြောင်းလဲခြင်းစာမျက်နှာ၊ အမျိုးအစားစာမျက်နှာ၊ သို့မဟုတ်ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာ။ အသွားအလာအကြီးအကျယ်ကျဆင်းသွားပါက၎င်းသည် Penguin 2.0 သက်ရောက်မှု၏လက္ခဏာဖြစ်သည်။
တိကျတဲ့သော့ချက်စာလုံးတွေထက်စာရင် keyword အုပ်စုတွေရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အဆိုင်းများကိုရှာဖွေပါ။ ဥပမာအားဖြင့်“ windows vps hosting”၊ “ windows vps hosting” နှင့်အခြားအလားတူသော့ချက်စာလုံးများကဲ့သို့သောသော့ချက်စာလုံးများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းထက်“ windows vps” အတွက်အဆင့်သတ်မှတ်လိုပါက။
သင့်ရဲ့အော်ဂဲနစ်အသွားအလာနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်ကိုခြေရာခံ။ Google analytics သင်သည်သင်၏ site ကိုလေ့လာစဉ်ကသင်၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်မည်သည့်သက်ရောက်မှုမှမဆိုပြန်လည်နာလန်ထူလာသည်။ အော်ဂဲနစ်အသွားအလာရာခိုင်နှုန်းကိုအထူးဂရုပြုပါ၊ သင်၏အဓိက site စာမျက်နှာအားလုံးတွင်ထိုသို့ပြုလုပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ pagesပြီ ၂၁ မှမေလ ၂၁ ရက်အတွင်းမည်သည့်စာမျက်နှာများသည်အော်ဂဲနစ်အသွားအလာအများဆုံးရရှိသည်ကိုရှာဖွေပါ။ ထို့နောက်မေလ ၂၂ ရက်မှစ၍ ထိုနံပါတ်များကျဆင်းခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
အဆုံးစွန်သောမေးခွန်းမှာ“ ကျွန်ုပ်ကိုထိခိုက်ခဲ့သလား” မဟုတ်ပါ။
သင့်အား Penguin 2.0 သက်ရောက်မှုရှိပါကသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ - \_ t
Penguine 2.0 မှပြန်လည်ရယူနည်း
1 အဆင့်။ သက်တောင့်သက်သာနေပါ။ ဒါဟာအဆင်ပြေသွားမှာပါ။
2 အဆင့်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ spammy သို့မဟုတ်အရည်အသွေးနိမ့်သောစာမျက်နှာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ရှိစာမျက်နှာတိုင်းအတွက်၎င်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိသလား၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အစာအဖြစ်သာတည်ရှိခြင်းရှိမရှိကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ။ အကယ်၍ စစ်မှန်တဲ့အဖြေက အကယ်၍များ ဖြစ်တယ်ဆိုရင်၊ သင့်ဆိုဒ်မှလုံးလုံးလျားလျားတိုးချဲ့သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားသင့်သည်။
အဆင့် 3။ spammy အတွင်းကလင့်များကိုဖော်ထုတ်ဖယ်ရှားပါ။ Penguin 2.0 ကြောင့်မည်သည့်လင့်များသည်သင်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုဖြုတ်ချနိုင်ပြီးသင့်အား Penguin XNUMX မှသင့်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းသိရှိနိုင်ရန်သင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည် အဝင် link ကိုပရိုဖိုင်းကိုစာရင်းစစ် (သို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ် ဦး ရှိသည်သင်တို့အဘို့ထိုသို့ပြု) ။ မည်သည့်လင့်ခ်များကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည်ကိုသင်သတ်မှတ်ပြီးပါက၊ ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူများကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိလင့်ခ်ကိုဖယ်ရှားရန်ယဉ်ကျေးစွာတောင်းဆိုခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားပါ။ သင်၏ဖယ်ရှားရေးတောင်းဆိုမှုများပြီးဆုံးပြီးနောက်၎င်းတို့ကို အသုံးပြု၍ လည်းဖယ်ရှားပစ်ရန်သေချာပါစေ Google's Disavow Tool.
4 အဆင့်။ ဆက်သွယ်မှုအသစ်တည်ဆောက်ခြင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွင်ပါ ၀ င်ပါ။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည်ရှာဖွေမှုရလဒ်များ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်ဟုသင်ဂူဂဲလ်အားသက်သေပြရန်လိုအပ်သည်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ယုံကြည်အားထားရလောက်တဲ့တတိယပါတီတွေဆီကယုံကြည်စိတ်ချရလောက်တဲ့မဲအရေအတွက်လိုအပ်လိမ့်မယ်။ ဤမဲများသည်ဂူဂဲလ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအခြားထုတ်ဝေသူများထံမှအဝင် link များပုံစံဖြင့်ရရှိသည်။ သင်၏အဓိကသော့ချက်စာလုံးများအတွက်မည်သည့်ထုတ်ဝေသူများကဂူးဂဲလ်သည်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ထိပ်ဆုံးနေရာတွင်ရောက်နေသည်ကိုတွက်ထုတ်ပြီး guest ည့်သည်ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုလုပ်ရန်သူတို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ရှေ့သို့သွားနေသည့်ခိုင်မာသော SEO မဟာဗျူဟာသည်လူမည်း ဦး ထုပ်ကိုအသုံးပြုရန်ငြင်းဆန်လိမ့်မည်။ ဒါဟာအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ် SEO ဆိုသည်မှာ3တိုင် ယုံကြည်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်အခွင့်အာဏာကိုတည်မြဲစေမည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့်ဖြစ်သည်။ အစွမ်းထက်သောအကြောင်းအရာများကိုအာရုံစိုက်ပါ၊ အောင်မြင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအောင်မြင်အောင်ကူညီခြင်း၏သက်သေအထောက်အထားရှိသောဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ SEO အေဂျင်စီများနှင့်သာအလုပ်လုပ်ပါ။
Tags: + googleပင်ဂွင်ငှက်ပင်ဂွင်း 2.0ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationseo
First Touch၊ နောက်ဆုံးထိ၊ Multi-Touch
Mashable ထံမှ Buzzwords စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း